ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး ခင်ယုမေအတွက် မြေးများရဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ် | Duwun
ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ အလှူငွေ ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး ခင်ယုမေအတွက် သားသမီးနဲ့ မြေးတွေက ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ အလှူငွေ ၁ သိန်းကျပ်လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ခင်ယုမေကတော့၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး ခင်ယုမေ အတွက် ရည်စူးပြီး သားသမီးနဲ့ မြေးတွေက ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ကို အလှူငွေပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးအကယ်ဒမီဒေါ်ခင်ယုမေ(ကွယ်လွန်) ၏ မြေးများကောင်းမှု။ (၁၃.၆.၂၀၁၉) ကြာသပတေးနေ့တွင် U.S.A နေထိုင်ကြသော ကွယ်လွန်သူရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီ ဒေါ်ခင်ယုမေ ၏မြေးနှစ်ဦးနှင့် မမိုးကလျာအေး . Mr Miguel Galawiz Russell Moe . Ericka Moe တို့မှ မွန် မြတ်အလှူအဖြစ်အလှူငွေ - ၁၀၀,၀၀၀ိ/ (တစ်သိန်းကျပ်တိတိ)အား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) သို့လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ သာဓု သာဓု သာဓုပါခင်ဗျာ’’ ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ခင်ယုမေဟာ မင်းသားကြီးကျော်ဆွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ သားတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အမေရိကမှာနေထိုင်တာပါ။ သူမကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က အမေရိကမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ သူမကွယ်လွန်ခဲ့တာ ၅ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ယုမေရဲ့ မြစ် ဖြစ်သူ Airica Moe ကလည်း Califonia State University မှာ ပညာသင်ကြားနေတာဖြစ်ပြီး Photo Model တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခင်ယုမေဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းက နာမည်ကျော်ကြားလွန်းလှတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ဦးခေါင်းထက်မှာ ပုဝါစီးလိုက်တိုင်း၊ လည်တိုင်လေးမှာ ပုဝါခြုံလိုက်တိုင်း ခင်ယုမေ စတိုင်လ် လေ လို့ ဆိုတဲ့အထိ ပြောစမှတ်တွင်နေကြတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ထမီကို ခြေသလုံးအထိ အတိုလေးတွေ ဝတ်ခဲ့ကြတာကလည်း ခင်ယုမေ စတင်လိုက်တဲ့ ဖက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ စတူဒီယိုတေးသံရှင်အဖြစ်ကနေ သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ယုမေက ‘’အသက်’’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းက ပရိသတ်တွေ စတင်အားပေးခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၆၁ ခုနှစ်က ‘’ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ’’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် အမျိုးသမီး ပညာသည်ဆု ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ ‘’ရွှေချည် ငွေချည်တန်းပါလို့’’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ယုမေဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ၈၂ ကား၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ၂ကား၊ ရုပ်မြင်သံကြားမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကား ၂ ကား တို့ကို ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၂ ကားရှိပါတယ်။